टंक चौलागाईं आइतवार, माघ २, २०७३ 2786 पटक पढिएको
ज्याकेटको जिपर बिग्रिएको धेरै दिन भइसक्यो ।
'घ्यार...घ्यार...घ्यार..' लगाउँदा कच्ची बाटोमा गुडेको मोटरझैं हुन्छ । लाग्दै लाग्दैन । उदयले सक्ने जति जतन गरेकै हो । तैपनि बिग्रिहाल्यो । जिपरबिना ज्याकेट लगाउन उनी बाध्य भए । विद्यालयमा खेल सप्ताह सुरु हुँदै थियो । उदय जिपर लगाउने खेलमा छानिए । जिपर नबिग्रिएको भए उनी खुसी हुन्थे ।
जाडो महिना भएकोले कि बनाउनै पर्‍यो, नभए नयाँ ल्याउनु पर्‍यो । अरू विकल्प थिएन । बुवाआमाले सल्लाह गर्नुभयो, 'कतै फाटेको छैन । जिपरमात्रै बिग्रिएको हो, बनाइदिउँ ।'
उनी बुवासँग लुगा सिलाउने ठाउँमा गए । उनले एउटा झोलामा आफैंले ज्याकेट बोकेका थिए । त्यहाँ धेरै जिपरहरू थिए । देखेर उनी खुसी भए । साना-साना, ठूलाठूला थरीथरीका जिपरहरू दाँत जस्तै लाग्यो उनलाई । उदयको खुट्टादेखि टाउकोसम्म पुग्ने जिपरहरू पनि रहेछन् त्यो पसलमा !
उनका दिमागमा रमाइला कुराहरू खेल्न थाले । मानिसले टाउकोदेखि खुट्टासम्म जिपर लगायो भने कस्तो हुन्छ होला !
गुरुआमाले कक्षामा 'सबैले आआफ्नो मुखमा जिपर लगाउनुस् त' भनेको उनले सम्झिए । उनले सानो जिपर देखे । ठ्याक्कै उदयको मुखमा ठीक हुने । मुखमा जिपर टाँसेर ऐनामा हेरे ।
'मुखमा पनि जिपर लगाउने हो बाबु ? आनन्द हुन्छ, खाने बेलामा खोल्यो ...अरू बेला बन्द गर्‍यो । मुखमा फोहोर, धुलो पस्दैन बिरामी पनि भइँदैन ' लुगा सिलाउँदै गरेकी दिदीले जिस्काइन् ।
'हुन्छ' मुखमा जिपर टाँसेको हुनाले उदयको आवाज सानो अनि अस्पष्ट सुनियो ।
उनलाई ज्याकेटको जिपर बनाउनु थियो । रातोमा नीलो रङ मिसिएको ज्याकेट बुवाको हातमा थियो । त्यसलाई मिल्ने जिपर खोजिरहेकी थिइन् लुगा सिलाउने दिदी । उदयको दिमागमा अझै रमाइला कुराहरू दौडिए ।
त्यतिबेलासम्म उनले आफ्नो दुवै आँखामा पालै पालो जिपर टाँसे । नाकमा जिपर टाँसे । कानमा टाँसे । शरीरका सबै अंगमा जिपर भएको कल्पना गरे उनले ।
जुत्तामा तुनाको सट्टा जिपर हाले कसो होला ? घरको ढोकामा ताल्चाको सट्टा जिपर लगाउन पाए ! किताब कापीका सबै पाना जिपर लगाएर बन्द गर्न पाए कस्तो मज्जा हुन्थ्यो । खाना पकाउने कुकरमा जिपर लगाएर बन्द गर्न मिल्छ कि मिल्दैन होला ! मलाई सबभन्दा मन पर्ने फलफूल सुन्तलामा पनि जिपर भइदिए ! जिपर खोल्यो सुन्तला खायो । उनले यस्तै कुराहरू कल्पना गर्न थाले । 'यो लामो जिपर बोडीलाई ठीक हुन्छ' उनले आफूलाई मनपर्ने तरकारी सम्झिए ।
'अँ, यो जिपर चाहिँ पप्पीको मुखमा लगाइदिनुपर्‍यो' उदयले आफ्नो घरमा पालेको पप्पीलाई पनि सम्झिए ।
तर अहँ, उदयको ज्याकेटलाई मिल्ने जिपर पाइएन ।
'दाइ ज्याकेट छोडेर जानुस् । तीन चार दिनमा बजार जाँदा खोजेर ल्याइदिउँला । यी सबै झोला र पाइन्टको लागि ल्याएका जिपर हुन्' उनले भनिन् । उदयलाई रिस उठेर मुखमै जिपर लगाइदिउँ जस्तो लाग्यो ।
भोलिपल्ट उनी विद्यालय गएर सरलाई सोधे, 'सर मेरो ज्याकेटको जिपर बिग्रिएको छ । आउट ड्रेसको ज्याकेट लगाउँछु नि ।' जिपर बिग्रिएको ज्याकेटले खेल हार्ने पक्का थियो ।
'सबैले स्पोटर्स ड्रेसको ज्याकेट लगाउनुपर्‍यो नि त कान्छु ! हजुरले मात्रै आउट ड्रेसको ज्याकेट लगाउनु मिल्दैन । बाबाममीलाई बनाइदिनु भन्नुस् न ।' खेल शिक्षकले सम्झाउनुभयो । खानाको लागि क्यान्टिनमा जाँदा धाराबाट तप् तप् पानी चुहिरहेको थियो । धाराको पनि जिपर बिग्रिएछ ! उनले सोचे ।
बगैंचाको धुपीको रूखले जिपर लगाएको देख्यो । गुलाबको फूल पनि जिपरभित्र पो रहेछ ! तर उदयको ज्याकेटको जिपर बिग्रिएको थियो । त्यो नबनाई खेल कसरी जित्नु ?
'कि नयाँ ज्याकेट ल्याइदिनु, कि यसको जिपर बनाइदिनु ' उदयको जिद्दीपछि घरमा छलफल सुरु भयो ।
'चार थरी ड्रेस छन् । बिगारेको बिगार्‍यै गर्छ । नयाँ त कसरी किन्न सकिन्छ ? ', हजुरआमा रिसाउनुभयो ।
जिपर बिग्रिएको उदयको ज्याकेट परिवारमा सबैको टाउको दुखाइ बन्यो ।
'जतन गर्दैन । हामीलाई दुःख दिन्छ । सानो छैनस् केटा ११ वर्ष भइसकिस् । ...हेर, के गरेको होला, दाँत जति सबै निस्किएको छ' हजुरआमाले ज्याकेट हेर्दै भन्नुभयो ।
'अस्ति जिपर नै पाइएन । मैले भ्याइनँ, तपार्इंले बनाइदिनु न आमा', उदयको बुवाले भन्नुभयो ।
'किन त्यस्तो खेल खेलाउनु परेको होला । कमाइ जति यसैको लुगामा स्वाहा !' आमाले पीर मान्नुभयो । साँझतिर हजुरआमा ज्याकेट हातमै झुन्ड्याएर हिँड्नुभयो ।
उदयले साथीलाई फोन गरे । 'मेरो ज्याकेटको जिपर बनेन भने तिम्रो ज्याकेट देऊ है' खेलमा सहभागी नभएका साथीसँग उनले सहयोग मागे ।
घरमा आएर राति खाना खाएपछि उदय सुते । जिपरले सिरकलाई चारैतिरबाट बन्द गरे । आँखामा पनि जिपर लगाएको कल्पना गर्दै उनी निदाए ।
'यो सारा संसार घुमेपछि बल्ल बन्यो । यति हालेको दुई सय ! अब जतन गर् ' हजुरआमाले भोलिपल्ट जिपर बनाएर ल्याइदिनुभयो । उदयको मनको जिपर खुल्यो । निरासा भुरुरु उड्यो । खुसी भित्र पस्यो ।
उदयलाई लिन स्कुल गाडी आयो । गाडीको सबैतिर जिपर थियो । जिपर खुल्यो, उनी भित्र पसे । जिपर बन्द भएपछि गाडी गुड्यो ।
खेल मैदानको जिपर खुल्यो । सबैजना मैदानभित्र पसे । सबैका अभिभावक आए । उदयले मनभित्र खुसी नै खुसी भरेर जिपर बन्द गरेका थिए ।
जिपर लगाउने खेलमा उनी नै प्रथम भए । उनले आफ्नो मनभित्र धेरै खुसी जम्मा पारे र सधैंको लागि जिपर बन्द गरे । हजुरआमालाई म्वाई खाएर टल्किने मेडल देखाउँदै भने, 'धन्यवाद हजुरआमा, तपाईंले जिपर बनाइदिनु भएकाले मैले गोल्डमेडल पाएँ ।'
सप्तरीमा नदी नियन्त्रणको लगानी बालुवामा पानी 594
ट्रम्प प्रशासनद्वारा दक्षिण एशियामा पहिलो पटक नेपालका लागि ५० करोड डलर स्वीकृत 9208
'लोकतन्त्र जोगाउन संविधान मिचेकै हुँ' 39861
विन्ध्यवासिनी मन्दिरको भेटी पुजारीको मुठीबाट खोसियो 5583